Fanabeazana sy soratra : namela mamy Rtoa Ratsimandrava Ranirina Juliette | NewsMada
Fanabeazana sy soratra : namela mamy Rtoa Ratsimandrava Ranirina Juliette
Par Taratra sur 09/09/2016
Oloben’ny soratra sy ny fanabeazana ary fikarohana. Ny 4 septambra teo no nindaosin’ny fahafatesana Rtoa Juliette Ratsimandrava. Notanterahina omaly, ny fametrahana ny nofomangatsiakany tany amin’ny fasam-pianakaviana Ambatomalaza.
« Matory ianao fa tsy maty ry Reny maminay», hoy i Felana Raveloarison, iray amin’ireo tanora nifanerasera akaiky tamin-dRtoa Ratsimandrava Ranirina Juliette io, omaly. Tsy ity poeta tanora manana ny maha izy azy ity ihany no nanganohano sy nirotsa-dranomaso fa saika ireo rehetra nahafantatra sy nanovo soa tamin’ity akademisiana andrarezin’ny fanabeazana sy soratra ary kolontsaina malagasy ity.
« Azonay nihantahantana toy ny Reny Rtoa Juliette Ratsimandrava », hoy Hajaina Naomy, filohan’ny fikambanana Havàtsa-Upem. Na ho an’ny olona tsirairay, na ho an’ny fikambanana na sampandraharaha samy hafa, namela mamy Rtoa Juliette Ratsimandrava. « Nianarako zavatra betsaka ny firesahana matetika taminy na teo amin’ny soratra, na teo amin’ny teny, na teo amin’ny tantara », hoy ihany i Hajaina.
Nahavita fikarohana lehibe maro teo amin’ny tontolon’ny soratra Rtoa Juliette Ratsimandrava. Tsy nitsahatra ny nanangona ireo voambolana maro fampiasa manerana ny Nosy, izay somary hadinodino ny fisiany, izy. Naneho tsy tapaka tamin’ny olona nifanakalo hevitra taminy ny harena ananan’ny teny malagasy. Nankahery ireo olona vonon-kiasa sy te hanao zavatra. Nanoro hevitra, sns. Mpahay tantara izy, « mino ahao fa ireo tanora sy olona maro nifanerasera taminy, hanohy ny tantara amin’ny alalan’ny fitozoana, fianarana, fikarohana ho fampandroasoana ity Madagasikara ity », hoy hatrany ny filohan’ny Havatsa-Upem.
Tsiahivina, nodimandry teo amin’ny faha-81 taony Rtoa Juliette Ratsimandrava. Filohan’ny sokajy haikanto sy hailaza ao amin’ny Akademia malagasy. Tale jeneralin’ny foiben’ny teny an’ny Akademia malagasy (Rarihasina). Manana ny mari-boninahi-pirenena « Grand Croix de l’Ordre national Malagasy ». Notoloran’ny minisiteran’ny Kolontsaina ny « Commandeur des arts, des lettres et de la culture ». Mpikajy ny haren-tsaim-pirenena.